सबैको हात खुट्टामा ६–६ औंला भएका यस्ता परिवार - ज्ञानविज्ञान
सबैको हात खुट्टामा ६–६ औंला भएका यस्ता परिवार
परिवारका २४ सदस्यमध्ये १४ जना ६ औँले भएका कारण यो डि सिल्भा परिवार फेमेली अफ सिक्सको नामले चर्चित छ ।यो दुनियामा एउटा परिवार यस्तो पनि छ जहाँ नयाँ बच्चा जन्मिने बेलामा उसका हातखुट्टामा ६–६ औंला होउन् भनेर परिवारका अन्य सदस्यले प्रार्थना गर्दछन् ।
हातखुट्टामा ६–६ औंला भएको यो परिवारको प्रार्थना सायद भगवानले सुनेछन् क्यारे हालै एउटा बच्चा जन्मिएकोमा उसका पनि ६–६ वटा नै औंला छन् । ब्राजिलको ब्रासिलियामा यस्तो आनुवंशिक विशेषता भएको परिवार छ । २४ सदस्यीय डि सिल्भा परिवारका उक्त १४ सदस्यका हातखुट्टा ६ औंले छन् ।
यो अद्वितीय परिवारमा सबै सदस्य ६ औंले हुँदा गौरवान्वित छन् । किनकि उनीहरु भीडबाट फरक भएकोमा गर्व गर्छन् ।हालै ६ औंले छोरा जन्माएका अलेसान्द्रो आफ्नो छोरामा पनि आफूजस्तै गुण सरेकोमा मख्ख छन् । आफूहरुको जस्तो अद्वितीय पारिवारिक चिनो दुनियाँका अरु परिवारमा नभएको उनी बताउँछन् ।
अलेजान्द्रो ६ औंले भए पनि उनकी पत्नी कातियाका सामान्य मानिसमा झैं ५ वटा नै औंला थिए । त्यसैले आफुहरुबाट जन्मिने छोराले बाउको बिँडो थाम्ने नथाम्नेमा उनी ढुक्क थिएनन् । जेठो छोरा गुलहेर्मका चाहिँ ६ वटै औंला थिए । हातखुट्टामा सामान्यभन्दा बढि औंला हुने आनुवांशिक अवस्थालाई पोलिडेक्टाइली भनिन्छ जुन हरेक १ हजार जन्ममा एक बच्चामा हुन्छ ।
Topics #परिवार #हात खुट्टामा ६–६ औंला
Don't Miss it आँखा दानका लागि सामूहिक देउसी
Up Next तिहारमा यसरी खान सक्छन् मिठाइ मधुमेह रोगीले
Family members break down during the cremation of an earthquake victim in Bhaktapur near Kathmandu, Nepal, Sunday, April 26, 2015. A strong magnitude 7.8 earthquake shook Nepal's capital and the densely populated Kathmandu Valley before noon Saturday, causing extensive damage with toppled walls and collapsed buildings, officials said. (AP Photo/Niranjan Shrestha)
के तपाई थाहा छ धेरै रुनुका फाइदाहरु ? यस्ता छन्
किताव पढ्दा होस् या फिल्म हेर्दा । कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् भावनात्मक विषयमा आँसु झारिहाल्छन् । भावनात्मक कुरा गर्दा आँसु झार्ने व्यक्तिलाई कमजोर मुटु भएको…
धनियाँको पानी पिउदा स्वास्थमा पुग्ने फाईदा यस्ता छन्
हामीले धनियाँ अचार बनाएर पिसेर खान सक्छौ भने च मसलाको रुपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । – धनियाँमा डोडेनल भन्ने…
रक्सि नपिउदा हुने फाइदाहरु
१. राम्रो निद्रा पर्नु रक्सी नपिउँदाभन्दा पिएपछि छिट्टै निन्द्रा पर्छ। यद्यपि यो गहिरो हुँदैन। २०१३ मा रक्सीको असरका विषयमा ‘अल्कोहोलिज्म’…
प्रति केजि १० लाख पर्ने केशर खेती गर्ने कि ? केशर खेतीबारे सम्पुर्ण जानकारी
द्गम स्थल दक्षिण यूरोपमा रहेको केशरको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई विश्वकै महँगो र दूर्लव कृषि उपजको रुपमा…
के हुदा के संकेत देखा पर्दछ ?
१. आँखा पहेंलो हुनु आँखाको सेतो भाग सधै सेतो नै हुनुपर्छ । यो भाग पहेंलो देखिएमा जन्डिस, कलेजो तथा पित्तथैलीको…
फाइबरको कमी हटाउनका लागि आहारमा यी भोज्यपदार्थहरू संलग्न गर्नुहोस्
फाइबरको कमी हटाउनका लागि आहारमा यी भोज्यपदार्थहरू संलग्न गर्नुपर्छ । हरिया सागपात हरिया सागपातमा फाइबर प्रचूर मात्रामा हुन्छ । दिनदिनै…